Ha malitere ịwụnye windo na Apple Campus 2 | Esi m mac
Nnukwu ogwe ndị edobere na Apple Campus 2
Dị ka Apple atụmatụ na nke nwere naanị ọnwa iri na abụọ n'ihu Iji mezuo ọrụ ndị dị na Apple Campus 2, ndị ọrụ ọrụ e kenyere ọrụ ahụ na-arụ ọrụ siri ike na isi ụlọ dị ka mgbanaka nke mgbanaka ma ọ bụ "oghere" na mgbakwunye na ụlọ mgbakwunye, gụnyere ụlọ mgbakọ ala, onye ọbịa etiti. ọnụọgụ na nyocha na ụlọ mmepe iji mezue n'oge na n'ime atụmatụ ụlọ ọrụ.
Dị ka ọ dị na mbụ, kwa ọnwa onye ọkwọ ụgbọ mmiri Ducan Sinfield, mee vidiyo dị iche iche site na ikuku iji gosipụta ọganiihu na-eme n’ụlọ ahụ na otu o siri gaa n’ọnwa gara aga. N'ime vidio a etinyere na nso nso a site na Jenụwarị, anyị nwere ike ịhụ ka esi wuchaa usoro nke isi ụlọ ahụ na mbido iko mbido nke mbụ amalitela ịwụnye n'ime na n'èzí ya.
Dika anyi puru ihu site na vidiyo, oganihu di nkpa ma n’ezie n’oge na adighi anya anyi ga-amalite ihu oru n’oru gbara ya gburugburu na uzo, njem na ahihia. Ka anyị cheta na Apple Campus 2 a ga-enwe 80% nke oghere ahịhịa ndụ kewara n'etiti ogige dị n'etiti na ebe a na-eri nri / ebe iri nri na ihe karịrị ụdị osisi 300 dị iche iche, gụnyere iche nke osisi mkpụrụ osisiEkwesiri iburu n'uche na ihe di n'okpuru ala dika ebe a na-adọba ụgbọala na ulo ezumezu ahihia.
Mgbe arụchara ọrụ ndị a, Campus a pụrụ iche ga-enwe a akwa gburugburu nke square mita 260.000 na-agụta ulo nke yiri mgbaaka, ebe a na-adọba ụgbọala, ebe a na-emega ahụ́ nke dị square mita 9000, audlọ mgbakọ ahụ dị square mita 11000 na mgbakwunye na echiche, ụlọ oriri na ọeterụeterụ na Storelọ Ahịa Apple nke ga-adị n'ime ogige a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Nnukwu ogwe ndị edobere na Apple Campus 2
Apple na-edebanye aha ọhụrụ metụtara ụgbọ ala enwere ike